MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » 2011 » januari
Joonis/Cagaarshow B (Hepatitis B) Qeexid: Jooniskan waxa dhaliya fayras la yidhaahdo Hepatit B. waxaana jira noocyo badan oo joonisa oo kala ah A, B, C, D iyo E kuwaas oo dhamaantood xanuun ku rida Beerka.
· admin	· 8 Comments Posted in: Maqaalo	Calool xanuun jiilaal (Winter Vomiting Disease)
Calool xanuun jiilaal (Winter Vomiting Disease) Cudurkan waxa keena feyras leh hido sidaha RNA bahda loo yaqaano Calici jilibka la yidhaahdo Norovirus ilaa imika inta la ogyahay waxa uu ku dhacaa oo kaliya dadka.
· admin	· 2 Comments Posted in: Maqaalo	Cilmi-baadhid Ku Saabsan Riixada Qadhmuun Ee Afka Dadka Ka Soo Baxada *Af Qadhmuun-ka*
Cilmi-baadhid Ku Saabsan Riixada Qadhmuun Ee Afka Dadka Ka Soo Baxada *Af Qadhmuun-ka* Af-qadhmuun-ka waxa afka qalaad lagu yidhaahdaa ”Halitosis” waana xaalad qofka afkiisa uu ka soo baxo nakhas ama hawo uraysaa, taas oo ka duwan af-urka subaxii lala soo tooso ee caadiga ah, kaas oo ku baab’a naadiifinta ilkaha ama cadayga subaxii.
· admin	· 34 Comments Posted in: Maqaalo	Daawo daawo barnaamijyada arrimaha caafimaadka ku saabsan
Waxa aanu dhammaan akhristayaashayda qiimaha iyo qaayaha leh ogeysiinaynaa, in liiska mareegta ee arrimaha caafimaadka ka hadlaya aanu soo gelinay laba barnaamij oo xaga tv-ga oo arrimaha caafimaadka ka hadlaya midi ka mida barnaamijkaasi waa mid english ah iyo mid iswidhish ah. Haddaba waxa ay akhrisyaashu ka heli karaan macluumaad aad iyo aad u xiiso […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Calool istaaga
Calool istaaga Maqaalkii hore waxaynu ka soo hadalnay miyirbeelida ama miyirbeelka. Haddaba maanta bal waxaynu wax ka tilmaami doonaa haddii Ebbe idmo calool istaaga.
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Wasiirka Caafimaadka Somaliland oo soo saaray Go’aan Saamaynaya Dadka Dawooyinka soo Dejiya
Wasiirka Caafimaadka Somaliland oo soo saaray Go’aan Saamaynaya Dadka Dawooyinka soo Dejiya 13/01/2011 – Wasiirka Caafimaadka Somaliland oo soo saaray Go’aan Saamaynaya Dadka Dawooyinka soo Dejiya Hargeysa (Jam)- Wasiirka caafimaadka Dr. Xuseen Muxamed Maxamed (Xoog), ayaa ku dhawaaqay in cid aan xubin ka ahayn ururka ay ku bahoobeen dawo soo dejishayaashu aanay Somaliland wax dawo […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Daawo qaybtii 2 aad ee qalliinka faruurta
Waa barnaamij dokomenteriya oo qaytbtiisii 1 aad ay wiigii hore laga soo daayey, Tv4 ee dalka Sweden. Haddaba qaybtii labaad halkan ka daawo. Sidaa iyo daawasho wacan. Waxaa kaloo runtii aanu jecelnahay in aanu idiin soo gudbino kadib markii uu dokumentrerigaasi dhamaaday xalay, in ay dadkii la socday ama daawanayey qaybtii hore iyo tii labad […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Babaasiir
Babaasiir Babaasiirtu waa buro ama cad yar o oka soo baxa daloolka futada, kaas oo keena cuncun iyo hafeef ama xanuun. Qiyaastii in ku dhaw kala badh (50%) dadka qaangaadhka ah way ku dhacdaa, laakiin waxay ku badan tahay Dumarka uurka leh, dadka ka weyn 50 jir iyo dadka buur buuran. Babaasiiru waxay ku samaysantaa […]
· admin	· 2 Comments Posted in: Maqaalo	Wararka caafimaadka (Health News)
Wararka caafimaadka (Health News) maadada sunta ah ee la yidhaaahdo dioxid maadada sunta ah ee la yidhaaahdo dioxid oo laga helay cuntada digaagada beedka sameeyadalka la siiyo ee dalka Jarmalka. Maadadan oo ah maado sun ah oo waxyeelayn karta dumarka uurk leh, cudurka dilaaga ah ee kansarkana keeni karta. Ilaa hadda lama garanyo sida ay […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Wasiirka Caafimaadka Somaliland oo faahfaahin ka bixiyay heshiisyo uu la galay hay’addo.
Wasiirka Caafimaadka Oo Faahfaahin Ka Bixiyay Heshiisyo Uu La Galay Hay’addo. Waxaanu samaynay Barnaamijyo Heshiisyo ah, Cisbitaalka Gobolka Saaxil…. Hargaysa (GNS)- Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Somaliland Dr. Xuseen Maxamed Muxumed (Xoog) ayaa maanta sheegay in ay kor u qaadeen tayada adeegyaddii Caafimaad ee Cisbitaalada Dalka, isla markaana Masuuliyadda iyo maalgelinta goobahaasi ay ku wareejiyeen qaar kamida […]